युरोकप २०२० – प्रिक्वाटर फाइनलमा को को भिड्दैछन ? | enews off
Home खेलकुद युरोकप २०२० – प्रिक्वाटर फाइनलमा को को भिड्दैछन ?
युरोकप २०२० – प्रिक्वाटर फाइनलमा को को भिड्दैछन ?
युरोकप २०२० मा बुधवार रातीको समूह चरणका खेलहरु सकिएसँगै प्रिक्वाटर फाइनलमा अर्थात नकआउट पुग्ने टोलीहरुको छिनोफानो भएको छ ।
युरोको नकआउट चरणमा १६ टिमले स्थान बनाएका छन् । ६ समूहको शीर्ष दुई र समूहको तेस्रो स्थानमा प्राप्त गर्ने मध्येको उत्कृष्ट चार टिमले अन्तिम १६ को यात्रा तय गरेका हुन् ।
यसपटक युरोकपको नकआउट चरणमा पुग्ने टोलीहरुमा समूह ए बाट समूह विजेताको रुपमा इटाली, उपविजेता वेल्ससँगै उत्कृष्ट तेस्रो टोलीको रुपमा स्विटजरल्यान्ड पुगेका छन । समूह बी बाट बेल्जियम समूह विजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा पुगेको छ भने समान ३ अंक भएपनि डेनमार्क रसिया र फिन्ल्यान्डलाई पछि पार्दै नकआउटमा प्रवेश गरे ।
समूह सी बाट तीन टोली अन्तिम १६ मा प्रवेश गरे । यस समूहमा शतप्रतिशत जितका साथ नेदरल्यान्ड्स समूह विजेता बन्दै नकआउटमा प्रवेश गरे । नर्थ म्यासेडोनिया र युक्रेनलाई पराजित गरेको अष्ट्रिया समूह उपविजेता भन्दै नकआउटमा प्रवेश गर्दा युक्रेन पनि भाग्यमानी सावित भए । उ पनि उत्कृष्ट तेस्रो टोलीको रुपमा प्रिक्वाटर फाइनल प्रवेश गरे ।
समूह डी बाट पनि तीन टोली नकआउटमा प्रवेश गरे । यस समूहबाट इंग्ल्यान्ड समूह विजेता, क्रोएसिया उपविजेता र चेक रिपब्लिक उत्कृष्ट तेस्रो टोलीको रुपमा नकआउट प्रवेश गरेका हुन ।
समूह ई स्वीडेन समूह विजेता बन्यो । उसँगै स्पेन उपविजेता बन्दै नकआउटमा स्थान बनाए । त्यस्तै समूह एफबाट विश्व विजेता फ्रान्स समूह विजेता बन्दै नकआउटमा प्रवेश गरे भने युरोकपको साविक विजेता पोर्चुगल अन्तिम खेलमा फ्रान्ससँग बराबरी खेल्दै उत्कृष्ट तेस्रो टोलीको रुपमा अन्तिम १६ मा प्रवेश गरे । यस समूहबाट जर्मनी उपविजेताहुँदै नकआउटमा पुगे ।
प्रिक्वाटर फाइनल अन्तर्गत नकआउट चरणका खेल २६ जुनबाट हुनेछन् । नकआउट चरणको पहिलो खेलमा वेल्स र डेनमार्क भिड्दै छन् । खेल आम्स्टरडममा नेपाली समयअनुसार राती ९ः४५ बजे हुनेछ । त्यस्तै राती १२ः४५ बजे इटालीले लन्डनमा अष्ट्रियाको सामना गर्नेछ ।
जुन २७ आइतवार राती ९ः४५ बजे बुडापेस्टमा हुने खेलमा नेदरल्यान्ड्सले चेक रिपब्लिकसँग भिड्ने छन । सोही दिन राती १२ः४५ बजे सेभियामा बेल्जियमले पोर्चुगलको सामना गर्नेछ ।
क्रोएसियाले स्पेनलाई प्रतिद्धन्द्धी पाएको छ । यी दुईबीचको खेल जुन २८ सोमवार राती ९ः४५ बजे कोपेनहेगनमा हुनेछ । त्यसैगरी सोही दिन राती १२ः४५ बजे बुकारेस्टमा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डबीच प्रतिष्पर्धा हुने छ ।
प्रिक्वाटर फाइनलमा इंग्ल्यान्डले जर्मनीको सामना गर्नेछ । खेल जुन २९ मंगलवार राती ९ः४५ बजे लन्डनमा हुनेछ । त्यस्तै प्रिक्वाटर फाइनलको अन्तिम खेल स्वीडेन र युक्रेनबीच जुन २९ मा राती १२ः४५ बजे ग्लास्गोमा हुनेछ । क्वाटर फाइनलका खेलहरु जुलाई २ तारिखदेखी शुरु हुनेछ ।
Previous articleयुरोकप २०२०– शानदार जितसँगै स्पेन र स्वीडेन अन्तिम १६ मा
Next articleभक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाखको बजेट सार्वजनिक